igumbi elipholileyo kwindlu yasefama yase rustic
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguRamona
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uRamona iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Uhlala kwindlu egciniweyo, malunga nama-250 eminyaka ubudala enamaplanga kumbindi welizwe. Yifama encinci eneenkuku, iikati neegusha. Igadi yothando kunye negadi enkulu ibonelela ngeendawo ezininzi zokuphumla. Unokunyuka, uye kukhenketho lwebhayisekile (indlela ye-Mulde cycle), khwela irabha kwinqanawa kwi-Mulde okanye uphumle nje. Amagumbi amancinci kwaye akhululekile. Unokufumana isidlo sakusasa esimnandi kum nge-6.00 euro / umntu.
Ngemiqadi ebonakalayo, umgangatho wokhuni kunye nezantsi, isilingi yamandulo yamaplanga, igumbi linomtsalane walo okhethekileyo. Iibhedi zikwindawo eyahlukileyo ukusuka kwigumbi lokuhlala.
Yonke into inikwe ingqwalasela enkulu kwiinkcukacha ukuze kwenziwe ubulungisa kubume bendlu yasefama.
Indawo yokuhlambela ekwabelwana ngayo neendwendwe ikumgangatho ophezulu kwaye indlu yangasese yeendwendwe ikumgangatho ophantsi. Kufuneka unyuke nam kwizinyuko.
Ndihambisa isidlo sakusasa kuhlaza phantsi kwemithi yama-apile okanye kwindawo yokutya ekhitshini, efikeleleka kuzo zonke iindwendwe. Indawo yokupheka exhotyiswe ngokupheleleyo ikhona apho, ukuze ukwazi ukudibanisa into emnandi kuwe.
Unako kwakhona igriza kunye nathi.
Ndibeke ilayibrari yam encinci enamakhulu eencwadi onazo. Apho unokukhangela phakathi kweenoveli zeentlobo ezahlukeneyo, iinyani ezininzi kunye neemagazini.
Ngaphantsi kweliso, abantwana banokudibana nezilwanyana kufutshane. Abanye banokufunjwa.
Kufuneka uze neebhayisekile zakho okanye ndingaququzelela irenti. Kukwasebenza okufanayo nakwiikhenkethi zephenyane ezineflatable.
4.84 ·Izimvo eziyi-50
4.84 · Izimvo eziyi-50
Intlambo yaseMulde, esikuyo, iphawulwa yindawo enentaba encinci enamahlathi axubeneyo kunye namadlelo emilambo. I-Mulde ikwadlula kwipropathi yethu kwaye unokuphola kuyo ehlotyeni elishushu. Kukho iinqaba ezininzi zeMedieval kule ndawo. Akukho kude naseThümmlitzwald.
Indlela yebhayisikile ye-Mulde ikhokelela ngaphaya kwendlu yethu.
Indawo yethu iphakathi kanye phakathi kweLeipzig, iChemnitz, iMeissen neDresden. Ezi zixeko zintle ezinenkcubeko kunye nobugcisa bazo zinokufikelelwa ngemoto ngaphantsi nje kweyure enye.
Uya kufumana iivenkile kunye neeresityu malunga ne-4km kude kwidolophu encinci yaseLeisnig eneNqaba yaseMildenstein.
Ndihlala ndikhona, ndihlala apha kwaye ndingathatha ixesha elininzi kwiindwendwe zam.